Aung's Investment: Dividends or Hidden Gem for Investors
Posted by Aung Myo Htet at 10/09/2009 12:32:00 PM
Nay Linn October 09, 2009 2:37 PM
Keep it up! It is really precious knowledge for us. thanksalot !!!!
NGUUNN October 09, 2009 7:41 PM
အတော့်ကိုကျေးဇူးတင်မိသဗျာ။ မြန်မာ blogger လောကမှာ ဒီလို financial post မျိုးလေးတွေ့ရတော့ ရေငတ်တဲ့သူ ရေတွင်းထဲကျဆိုသလိုပဲ။ Thanks so much.
စန္ဒကူးမေ October 10, 2009 1:05 AM
nyimuyar October 10, 2009 3:40 AM
တခါ စာလာဖတ်တိုင်း စေတနာတွေကို တခါ လေးစားသွားပါတယ်
Aung Myo Htet October 10, 2009 4:43 PM
Commentတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Nice to have like-minded friends.
Aung Myo Htet October 10, 2009 5:02 PM
Feed Rollထည့်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း Andyကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Diarys October 11, 2009 3:53 AM
Dividend ကတော့ Singapore မှာ tax exempt (one tier) dividend ကို ကျင့်သုံးဘာတယ်။စကား မစပ် Aussie မှာ ဘာဘာသာ ဖတ်တလဲမသိ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာများလေ့လာသလား။
Aung Myo Htet October 11, 2009 9:58 AM
ကျွန်တော်ဒီမှာ ဘာမှ Formallyတက်မနေပါဘူး။ Investingနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကောင်းနိုးရာရာ စာအကုန်ဖတ်ပြီး တကယ်Tradingပဲ လုပ်နေပါတယ်။ Marketဟာ အကောင်းဆုံးကျောင်းပါပဲ။ SGက Dividendအကြောင်းသိရလို့ ကျေးဇူးပါ။